‘देशकै पहिलो उत्कृष्ट शाखा बनाउने लक्ष्य छ’ | MyBhaktapur.COM "The Mirror of Nepal" | News | Promotion | Community | Regional | Entertainment | Events | Information |
Friday, April 6, 2012 8:56 pm, Posted by mybhaktapur 0	| Interviews
‘देशकै पहिलो उत्कृष्ट शाखा बनाउने लक्ष्य छ’
मनोजकुमार थापा, सभापति, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, भक्तपर भक्तपुर, २४ चैत ः(Mybhaktapur.Com) नेपाल रेडक्रस सोसाइटी भक्तपुरको १७ औं वार्षिक साधारणसभा तथा जिल्ला अधिवेशन यही चैत २५ गते हुँदैछ । दुवाकोट उपशाखाको आतिथ्यमा हुने उक्त अधिवेशन नजिकिएपछि जिल्लास्थित रेडक्रसकर्मीहरूमा क्रियाशीलता देखिएको छ । शाखाअन्तर्गत रहेका १९ वटै उपशाखाको साधारणसभासमेत सकिसकेको अवस्थामा जिल्लाका रेडक्रसकर्मीहरू जिल्लाको नेतृत्व गर्ने सक्रिय एवंजुझारु व्यक्तिहरूको खोजीमा लागेका छन् । जिल्ला सभापति र १२ कार्य समिति सदस्यको निर्वाचन हुने उक्त अधिवेशनमा यसपालि एकसय २१ जना सभासद्ले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने भएका छन् । अधिवेशनको लागि गठित निर्वाचन मण्डलले मतदाताहरूको नामावली र निर्वाचन तालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ ।
अहिलेसम्म वर्तमान सभापति मनोजकुमार थापाबाहेक कसैले सभापति पदमा उम्मेदवारी दिने सार्वजनिक घोषणा गरेको देखिएको छैन । त्यसैले वर्तमान कार्य समितिमा रहेकाहरूले निरन्तरता पाउने सम्भावना देखिएको छैन । फेरि रेडक्रसमा आएर समाज सेवागर्ने अभिलाषा बोकेका कार्य समिति बाहिरका रेडक्रसकर्मीहरू पनि नभएको होइन । कसैले भित्रभित्रै एक भोट भए पनि सभापतिमा उठिन्छ पनि भनेको सुनिएको छ । यस्तो स्थितिलाई आँकलन गरी वर्तमान कार्य समितिले सबैलाई समेटेर सर्वसम्मत गर्ने प्रयास भइरहेको बताइन्छ । दुई पक्षीय र त्रिपक्षीय वार्ता अघि बढाइँदा सबैले सहमति गरेरैसर्वसम्मतमा जानुपर्नेमा जोड दिएका छन् । तैपनि अधिवेशन नै हुने भएपछि यस्तै हुन्छ भनेर भन्न सकिने अवस्था हुँदैन । अन्तिम समयसम्म पनि उलटपुलट हुने सम्भावना जिवित्तै हुन्छ । त्यसैले भविष्यको सम्भावनाको कुरा समयकै हातमा छाडेर भक्तपुरमा रेडक्रस अभियानमा केन्द्रित भएर भक्तपुर शाखा सभापति एवं रेडक्रसका केन्द्रीय सदस्य मनोजकुमार थापासँग माई भक्तपुर डटकमका प्रतिनिधि ईश्वरकाजी खाइजूले गरेको कुराकानी –
भक्तपुरमा रेडक्रस अभियान कसरी अघि बढिरहेको छ ?
सबैको सहमति, सहकार्य र एकतामै भक्तपुरका रेडक्रस अभियान सकारात्मक ढंगले अघि बढिरहेको छ । शाखाका सम्पूर्ण काम कारबाही पारदर्शी ढंगले अगाडि बढाउँदै आएका छौं । साथै यो कुनै पार्टीको भ्रातृ संगठन होइन, जसले गर्दा एउटा व्यक्ति, समूह वा गुटको लहडमा चलोस् । यो संस्था शुद्ध समाज सेवा गर्ने स्वयम्सेवीहरूको संस्था हो ।
तपाईं पुनः सभापति चुनाव लड्दै हुनुहुन्छ, तपाईं के कारणले सभापति जित्छु भन्ने सोच्नुहुन्छ ?
रेडक्रस स्वयम्सेवीहरूको संस्था भएकोले यसमा म एक्लैले केही गर्न सकिने अवस्था हुँदैन । त्यसैले साथीहरूकै सल्लाह र सहमतिमा हामीले टीम स्पिरिटलाई कायम राख्दै भक्तपुरमा रेडक्रसलाई समुदायको अभिन्न अंग बनाउने उद्देश्यले काम कारबाही अगाडि बढाइरहेका छौं । हालसम्मको अवधिमा भक्तपुरका अधिकांश उपशाखाहरू आत्मनिर्भर हुँदै आएका छन् । कुनै उपशाखाले एम्बुलेन्स चलाएका छन्, कसैले शव बाहन सञ्चालन गरिरहेका छन् । त्यस्तै कुनैले करोडौं रुपैयाँको बहुउद्देश्यीय भवन निर्माण गरी आत्मनिर्भरतातर्फ अघि बढिरहेका छन् । त्यसैले हाम्रो उद्देश्य भनेको उपशाखा र स्वयम्सेवी रेडक्रसकर्मीको क्षमता विकास गर्नुका साथै उनीहरूलाई समाजमा घट्ने कुनै पनि किसिमको विपद्मा पूर्वतयारी अवस्थामा राख्ने हो । भक्तपुर भूकम्पीय जोखिमयुक्त क्षेत्र हो । त्यसैले रेडक्रसका स्वयम्सेवीहरू कुनै पनि समयमा उद्दार तथा प्राथमिक उपचार र विपदव्यवस्थापनमा सदैव अग्रपंक्तिमा हुने गरी संयन्त्र निर्माण गर्ने योजना बनाएका छौं । यसको लागि जिल्लाका नगरका वडा र गाउँमा बढीभन्दा बढी स्वयम्सेवी रेडक्रसकर्मी तयार गरी उनीहरूलाई सक्षम र सबले बनाउने अभियानमा लागेका छौं । विपद्बाहेक रेडक्रसले अन्य कुन कुन क्षेत्रमा कार्य गर्दै आएको छ ? रेडक्रसले विपद् मानवका हरेक समस्यामा कार्य गर्दै आएको छ । यसबाहेक समुदायको विकास, खानेपानी, सरसफाइ तथा समुदायको क्षमता विकासमा पनि रेडक्रसले कार्य गर्दै आएको छ । भक्तपुर रेडक्रसअन्तर्गत दुई वटा विद्यालयमा आधारित योजना अघि बढिरहेको छ । यी योजनाअन्तर्गत विद्यालयलाई प्राकृतिक विपद्बाट मुक्त गर्ने तथा दक्ष विद्यार्थीमार्फत समुदायमा विपद्बारे पूर्वतयारी, खोज तथा उद्दार र प्राथमिक उपचारका कार्य भइरहेको छ ।
तपाईं पुनः नेतृत्वमा आउनुभयो भने के के कार्य गर्नुहुन्छ ?
रेडक्रस जिल्ला सभापति एवं कार्य समितिको कार्यकाल चार वर्ष हुन्छ । यस बीचमा हामीले सम्पूर्ण उपशाखाहरूको क्षमता विकास गरी आत्मनिर्भर बनाउने रणनीतिअनुसार काम गरिरहेका छौं । यी उपशाखालाई समुदायमा स्थापित हुने तथा समाज सेवा होस् वा विपद्को समयमा होस् रेडक्रसलाई समुदायको पर्यायबाचीको रुपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिएका छौं । केन्द्रीय रेडक्रसको भिजन २०२० अनुसार भक्तपुर रेडक्रसले पनि आफ्नो छुट्टै पञ्चवर्षीय कार्ययोजना निर्माण गर्ने सोच बनाएका छौं । उक्त योजनाअनुसार हाल ७५ वटा जिल्ला शाखामा पाँचौं स्थानमा रहेको भक्तपुर उपशाखालाई पहिलो उत्कृष्ट जिल्ला शाखा बनाउने लक्ष्य लिएका छौं । हाल भक्तपुर रेडक्रस मध्यमाञ्चलका १९ शाखामा पहिलो र महिला सदस्य बढाउने देशका ७५ वटे शाखामा दोस्रो स्थानमा रहेको छ । यस उपलब्धिअनुसार जिल्लाका सम्पूर्ण रेडक्रसकर्मी, जुनियर तथा युवा सर्कल आरक्र्याडलगायतको साथ र सहयोगले भक्तपुर पहिलो उत्कृष्ट जिल्ला शाखा हुने विश्वास लिएका छौं ।
रक्तसञ्चार सेवालाई कस्तो बनाउने सोच्नुभएको छ ?
भक्तपुरमा २०४५ सालदेखि रक्तसञ्चार सेवा सुरु भएको हो । तर बीचमा व्यवस्थापनको कमीले सेवा राम्रो सञ्चालन हुन सकेन । पछि २०६० सालपछि शाखाले आफ्नै व्यवस्थापनमा सेवा सुचारु गरिरहेको छ । पछिल्लो समय यस सेवाले केन्द्रबाहेक सबैभन्दा बढी रगतको कम्पोनेन्ट बनाउने सेवाको पुरस्कार प्राप्त गरेको छ । देशभर सञ्चालित ७६ वटा रक्त सञ्चार सेवा केन्द्रमा भक्तपुरको स्थान राम्रै छ । त्यसैले हामीले ‘रगत नपाए भक्तपुर आउनू’ भन्ने अभियान नै अघि बढाएका छौं । रगत आवश्यक भएर भक्तपुर आएकालाई हामीले अहिलेसम्म खाली हात पठाएका छैनौं । यस केन्द्रले शाखालाई आफ्ना गतिविधि बढाउन धेरै सघाउ पु¥याउँदै आएको छ ।
यस रक्तसञ्चार केन्द्रको सेवा थप प्रभावकारी बनाउन केही गर्ने सोच्नुभएको छ ?
रगतको बढी माग हुने भनेको अप्रेशन गर्न हो । यस्ता रगत बढी चाहिने क्यान्सर अस्पतालसँगै अहिले मृगौला प्रत्यारोपण केन्द्र भक्तपुरमा सञ्चालनमा आउन लागेको छ । यसले गर्दा केन्द्रको चुनौती पनि बढेको हामीले महसुस गरेका छौं । त्यसैले यस केन्द्रलाई आधुनिकीकरण गर्दै रगतको कम्पोनेन्ट बनाउन तथा आवश्यकताअनुसार रगतको आपूर्ति बढाउन आवश्यक सम्पूर्ण प्रविधिले युक्त बनाउने योजना बनाएका छौं । अहिले डाक्टरहरूले पनि बिरामीको आवश्यकताअनुसार रगतको कम्पोनेन्ट प्रयोगर्न थालेकाले सोहीअनुसार केन्द्रलाई सक्षम बनाउँदै लानेछौ. । केन्द्रको सञ्चालनको लागि हालै जिल्ला विकास समिति भक्तपुरले रक्त संकलन भ्यान सहयोग गरेको छ । जुन हाल सञ्चालनमा समेत आइसकेको छ । त्यस्तै भारतीय दूतावासमा केन्द्रकोलागि आवश्यक सहयोगको निम्ति प्रस्तावना पेश गरिसकेका छौं । लक्जेबर्ग रेडक्रसले पनि यसको लागि सहयोग गर्ने रुचि देखाएको छ ।
रेडक्रस सञ्चालनको लागि के कस्तो आर्थिक व्यवस्थापन गर्ने सोच्नुभएको छ ?
हो, रेडक्रस जस्तो संस्था चलाउन धेरै गा¥हो छ । यो कुनै सरकारी योजनामा पनेर् संस्था होइन । यसका छुट्टै दातृ निकाय पनि छैन । त्यसैले सबैले आ–आफ्नै ढंगले आत्मनिर्भर हुने बाटो पहिल्याई कार्य गर्दै आएका छन् । त्यसैगरी भक्तपुर रेडक्रसलाई पनि आत्मनिर्भर बनाउन र यसका स्वयम्सेवक र उपशाखाहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि आर्थिक प्याकेजसहितको कार्ययोजना निर्माण गर्दैछौं । त्यसको लागि एक करोड रुपैयाँको अक्षयकोष खडा गर्दैछौं । हालसम्म उक्त कोषमा करिब असी लाख रुपैयाँ जम्मा गर्न सकेका छौं । यसले जिल्लाको हरेक गतिविधि सञ्चालन तथा कार्यक्रम व्यवस्थापनमा ठूलो सहयोग पुग्नेछ । फेरि रेडक्रसको आर्थिक पारदर्शिता सबैको चासोको विषय हो । रेडक्रसका सम्पूर्ण गतिविधि र आर्थिक अवस्था कसैबाटलुकेको र छिपेको छैन ।यसका साथै सम्पूर्ण उपशाखालाई एम्बुलेन्स वा अन्य आकस्मिक सेवाका साधन सञ्चालन गर्ने क्षमतावान बनाउने लक्ष्य लिएका छौं । त्यस्तै उद्दारमा खटिने स्वयम् सेवकको उपचार कोष खडा गर्ने तयारी सुरु गरिसकेका छौं । यसको लागि रेडक्रसकर्मीहरूको जन्मदिनमा गरिने खर्च जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाएका छौं । यसोहुँदा कोही पनि स्वयम्सेवक आफ्नो कार्य क्षेत्रमा खटिन पछि हट्नेछैन ।
एसएलसी परीक्षाको सम्पूर्ण तयारी पूरा ः परीक्षा नियन्त्रक रिमाल
महिला सक्षम र योग्य भए देशकै लागि फाइदा ः उद्योग अधिकृत भट्टराई
‘दक्षिण एसियाकै नमुना केन्द्र बनाउँछौं’ ः डा. श्रेष्ठ
Comment	You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> ← रिमोट कन्ट्रोलबाट जारी गरेको संविधानले जनताको हितमा गर्दैनः राप्रपा नेपालका अध्यक्ष —कमल थापा
A centuries old pond in Bhaktapur. →